Wayyaanee irra aanuuf ummata Oromoo maraaf yaamicha hatattamaa
25 Adoolessa 2012
Gaalchi fayyaa dhabiinsi Melles Zeenaawwii mootummicha hamaa Itoophiyaa jeequmsaaf saaxile. Addi Bilisummaa Ummata Tigiraay gargaartota biyya alaan deggeramee haga tokko humna qabu deebisee ijaarratuun bayyaannatee ittifufuu yoo yaale illee yeroo mootiin bakka irraa buqqa’u aadaa angoof jecha walgidduutti dorgommii hamaa geggeeffamu waan qabaniif addichi kolaasama irraa fagoo hinjiru. Humnootni bilisummaa Oromoo fi ummatni Oromoo martinuu jabinaa fi if kennuun qabsoo bilisummaa tarkanfachiisuu qabu.
Haalli yeroo hatattamaan nugaafataa jiru humnootni qabsoo bilisummaa hundi qabeenyaa jiru waliin qindeeffatuun akka qabsootti kallacha waloon bobba’aniif yaamichi akka godhamu dha. Kanaf, mata mataanis ta’e jaarmaan kaayyoo bilisummaa Oromoo qabatuun socho’aa ka jirtan hundi harka walqabatuun tokkummaa keessan akka cimsitan isin hubachiisna. Yeroo ammaa kana ABO kayyoo bilisummaa ummata Oromoo jalatti tokkummaan hiriirsuu fi jabeessuuf hojjetaa akka jirru isinii mirkaneessuu feena.
Qabsoo ummataa deebisanii cimsuun Oromiyaa walaba taate argamsiisuuf qabsoo godhamu jabeessuuf hawaasotni Oromoo biyyoota alaa keessa jiran horii addaa atattamaan akka gumaachan gaafanna.
ABOn kaayyoon qabsoo ummata Oromoo Oromiyaa walaboomsuuf tauu isaa, amantii kamuu waliin hidhata ka hinqabaanne ta’uu isaa akkasumas amanteen hundi bilisa tauu isaa ka iitti amanuu fi sagantaa siyaasaa isaa keessattis galmeeffatuun ka ittiin socho’u yommuu ta’u kana ilaalchisee eenyuma waliin mariitti kan dhiheessu miti.
Oromiyaa keessatti Hawaasummaanis ta’e siyaasaan ka hidhata walfakkaatu ABO waliin qabdan, saboontota Oromoo fi Mootummaa Itoophiyaa jalatti ka hojjetaa jirtan, olola diinni ummata keenya addaan hiruuf dhimma itti bahaa jiru irratti diddaa akka argisiistan, hawaasota Oromoo keessattis walitti dhufeenya hawaasota Oromoo akka waloon tiksitan akkasumas tokkummaa saba keenyaa akka eegdan hubachiifna. Oromiyaa keessa ka jiraatan hundi gosaan, amantiin akkasumas sanyiin otoo addaan hinbaasin mirga dhala namummaa isaanii eeguun aadaa Oromoo abbootii keenya irraa dhaalle ta’uu isaa mirkaneessina.
Sirna dulloomaa deebisanii fiduuf abjuun isaanii ka jalaa hindu’in humnootni farra bilisummaa Oromoo Oromoota tokko tokko waliin walta’uun kutaa fi amantiin ummata keenya adda baasuun aangoo Finfinnee deebisanii qabachuuf tattaaffiin godhan dhokataa miti. Waan ta’eef Oromootni bakka kamuu jiraattan harka walqabatuun adda tokko umuun tokkummaa ummata keennaa qaroominaan diina irraa akka tiksitaniif yaamicha goona.
Kanneen Tokkummaa ummata keennaa diiguuf akkasumas bu’aa seena qabeessa qabsoo keennaan arganne duubatti deebisuuf tattaafataa jiran hojii ummata keenna dagachiisuuf itti jiran daddaffiin akka irra of qusatan gaafanna.
Humnootni bilisummaa Oromoo agoobara tokko jalatti tokkummaa umuun akka waliin bobba’uu danda’aniif yaamicha goona. Tokkummaa fi waliigalteen mootummaa koloneefftaa of irraa kaasuun nagaa fi tasgabiin jiraachuuf Oromiyaa walaba ijaaruu qabna. Yoo tokkummaa qabaanne, walhubachuu dandeenye, ofkennine akkasumas ijaaramne yeroo gabaabaa keessatti injifannoon bilisummaa keenna gonfachuuf waan nu dhorku gonkumaa hinjiru.